नजिक न्युज | बझाङ्गमा कोरोना परीक्षण शून्यमा झर्‍यो, संक्रमणको जोखिम कायमै
तरुणा जोशी, बझाङ्ग: पछिल्लो समय बझाङमा कोरोनाको परीक्षण शून्यमा झरेको छ। समुदायस्तरमा कोरोना भाइरसको जोखिम कायमै रहेपनि परीक्षणका लागि अस्पतालमा नआँउदा संक्रमितको संख्या पनि शून्यमा पुगेको हो। दोस्रो चरणको कोभिडबाट संक्रमित हुँदा जिल्लामा कोभिडका बिरामीहरु परीक्षण गराउन आउने गरेको भएपनि पछिल्लो समय परीक्षण गराउन नआउने गरेको जिल्ला अस्पताल बझाङका कोरोना सम्पर्क व्यक्ति डा. मिलन खड्काले बताए।
एकातिर कामको सिजन भएको र धेरैजस्तो व्यक्तिलाई कोभिड संक्रमण भएर निको भइसकेको हुनाले कोरोना संक्रमितको संख्या केही घटेको समेत डा. खड्काले बताए। कोरोनासँग सम्भावित लक्षणहरु नदेखिएको खण्डमा कोभिड परीक्षण नगराउँदा पनि हुने उनको भनाई रहेको छ।
कामको सिजन भएकाले स्थानीयहरुले हल्का बिरामी भएपनि वास्ता नगर्ने गर्नाले पनि जिल्ला अस्पतालमा कोरोनाको परीक्षण गराउनेको संख्या घटेको हो। परीक्षण गराउनेहरुको संख्या कम भएपनि जिल्लामा अझै कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहेको डा.मिलन खड्काले बताए। केही लक्षण देखिएको वा कोरोना लागेको आशंका लागेमा परीक्षण गराउन पनि उनले सबैमा अनुरोध गरेका छन्।
यो सँगै जिल्लामा कोरोना मुक्त हुनेको संख्या एक हजार पाँच सय ४० पुगेको छ भने, अब जिल्लाको साइपाल गाँउपालिकाका १ जना, तलकोट गाँउपालिकाका १९ जना, जयपृथ्वी नगरपालिकाका १ जना, खप्तड छान्ना गाँउपालिकाका ९ जना र विथ्थडचिर गाँउपालिकाका ३ जना गरी ३३ जना संक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य कार्यालय बझाङले जनाएको छ। बझाङमा कोरोनाका कारण २० जनाको मृत्यु भएको छ।
शनिबार ०५, असार २०७८ ११:०१ मा प्रकाशित